downloads 8 082
Luka Midic, Kaiser chiefs Savic
Soko G-2 Galeb bụ ụgbọ elu ndị agha Yugoslav. An add-on ibudata kpamkpam. Nrọ ijikwa, ụda ndị ahụ dị oke mma!
Aircraftgbọ elu a na-anabata stunts niile. Gee ntị na ume onye na-anya ụgbọelu dabere na ihe ndị ha chọrọ: nke a bụ mmetụta bara uru na njem ahụ !. Igwe eji nrọ mee ọ pleasantụ na dịkwa mfe ife. A na-enweta ya na ndozi asatọ. Atụla ụjọ: mgbe ị na-ebupụta nke a add-on, ị tozuru oke ikuku nke ikuku nke pilot. Kedu ihe ọzọ, nke a bụ ihe kwesịrị ekwesị, kelere ndị ode akwụkwọ maka ọrụ ha.
The SOKO G-2 Galeb (English: siigol) bụ otu engine, abụọ-seater elu ugboelu ọzụzụ na ìhè ala-agha ụgbọelu ahụ mere site ATI na-arụpụtara site SOKO nke Yugoslavia. G-2 Galeb ekedi akpa ugboelu ugbo elu Oghere Usoro arụpụtara ke Yugoslavia na Balkans.
Onye edemede: Luke Midic, Goran Savic